Ogaden Online: The official homepage of Ogaden on the Internet - Ogaden
Text size	Home Horn NewsDjibouti Somalia Eritrea Kenya Ethiopia Ogaden WararkaOgaden Itoobiya Soomaaliya Kenya EntertainmentMusic HealthDiet and Fitness You and Your Family Commentary & AnalysisEditorial Opinion Community EventsWararka Tacsi Tahniyad Ogeysiis Announcement Radio Xoriyo Radio ICDSabti Axad Isniin Arbaco Radio Qorahay Home Wararka Ogaden
Sirdonka Itoobiya oo kku fashilmey Afduub ay ka geysteen Xeryaha qaxootiga ee Kenya	Saturday, 11 October 2014 14:54	administrator	War naga soo gaadhey Maagalada Wajeer ee dalka Kenya ayaa sheegaya in habeenkii Jimcaha soo galayey ee bisha OKtober 10 ay dabley hubeysan Afduub ka geysteen tuulada Sabuuli oo taala Koonfurta Wajeer.Sida warku sheegayo Afduubkey ayaa loo geystem nin ka mid ah Qaxootiga Ogadeniya ee ku nool xeryaha IFO. Ninkan oo lagu magacaabo Wacdi cali hoof ayaa sheegay in goor fiidkii ah ay laba nin oo ku hubeysan Bastoolada geesaha ka soo galeen, kuna qasbeen in uu raaco.Labadan nin ayaa tuulada lug kaga saarey oo lu geysiiyey qiyaastoo dhawr KM , si ay u ugu qaadaan Baabuur u diyaarsanaa. Intii ay siiwadeen waxay gaadhsiiyeen dhaawacyo. Balse, sida ii Wacdi sheegay waxay Afduubayaashii ka lumen wadadii ay ku ogaayeen Baabuurka sugayey, arintaas oo keentan in ay in badan jidad cidla ah ku meereystaan.
Read more...	Cudurka Jadeecada oo la dilaacay Ogaden	Sunday, 12 January 2014 22:28	administrator	Wararka naga soo gaadhaya Ogaden ayaa sheegaya in cudurka dilaaga ah ee Jadeecadu ka dilaacay Ogaden...
Read more...	Xasuuqii la iska indho tirey ee Ogaden	Saturday, 30 November 2013 14:39	Ogaden Online	Shir looga hadlayey ku xad gdubka arimaha xu...
Last Updated ( Saturday, 30 November 2013 14:46 )
Read more...	Xerada qaxootiga ee Dhagaxley oo kulan laqu qabtey.	Saturday, 23 November 2013 14:37	Ogaden Online	Qaxootiga ka soo barakacay Ogaden eek u sugan xerada Dhagaxley ee wadanka Kenya ayaa maalintii Jimca...
Read more...	Dil iyo Dhaawac loo geystey ganacsato ku sugan Koonfur Afrika	Monday, 01 July 2013 18:01	Ogaden Online	War deg-deg ah oo naga soo gaadhaya Wadanka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in nin ganacsade ah oo u dh...